Intliziyo egama lingu "Pepe" - iGeofumadas
NgoSeptemba, 2011 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Njengomntwana ndandinxiba ihempe endandinikela ngayo kuSuku lwaBantwana lwaMazwe ngaMazwe, ndingazi nokwazi, nditsho kwanesixeko esasinendawo zayo zepikniki. Kwiminyaka kamva ndaba ngumthengi wekona encinci phambi kweParque La Merced eTegucigalpa, apho ndandidla ngokufihla ngeMigqibelo ukuze ndiluke phakathi kwemisebenzi yesiqhelo kunye nemisebenzi yam yempelaveki. Umoya wawungemhle kangako, kodwa ukuba wedwa kwakumnandi ngencasa efanayo ne-chilaquiles, incoko emnandi yomfazi omnyama owayeye kwirejista yemali kwaye yanika incasa elungileyo kubukhazikhazi bobufundisi beparishi ababeze nesuphu. ”Ukuphelisa ukubanjwa kwakhe ukuze aqale enye.
Ukukhumbula oko kundenza isigaxa emqaleni wam, yayiyiminyaka yemizobo yam yokupeyinta ioyile kwindawo ezimnandi kunye namazwi ekubetheni ukuthula ngaphambi kokuba ifike intombazana ikhanyise amehlo am. Uxolo walonwabela olo cwangco luthelekisa nemifanekiso yabantu abadumileyo eyayixinanise iindonga kubungqina bokuba wayetyelele amashishini ale ndoda, inene laseCuba apho uFidel ahlutha khona zonke izinto zakhe kodwa hayi amaphupha akhe, awayeze kuwo. Dibana namazwe angaphandle ukuhlala kwimbali njengegama elifanayo lokutya okuhle kunye nesisa.
Kwiminyaka yakutshanje kwafuneka ndibe nobuhlobo kunye nomfazi wakhe, owamangcwaba wabonisa amagama endikucaphulayo, phantse ngemvume efanayo kwintombazana eyanikele inxalenye engaphezulu kwesigama seprose.
I-Confectionery, ii-cookie, ukutya okuninzi kunye ne-hullabaloo eninzi, kwakulungiselelwe usuku lomntwana ekuqaleni.
Yena, uxhalabile, ulungele omnye umnyaka ukuba enze umthendeleko owawusakuba yinxenye ye-ajenda yakhe.
Ndandingazi ukuba ukuba nenxaxheba kulo umntu onjalo ecaleni umntu iprojekthi enkulu, kodwa uThixo ngenceba yakhe enkulu nenceba bakhetha ukukhonza intliziyo onovelwano ukuba mna ndafunda amaxabiso obungunaphakade, ezifana ezifikelela ngayo abasweleyo, musani kuba ukuba kwakukuninzi kodwa ngenxa yokuba kuyimfuneko imiphefumlo yethu uzaliswe luthando ngokusebenzisa inkonzo kwabanye. Mna ndingumfazi nelungelo ukuba yema ecaleni yokuba olungenanceba kwaye wabelana naye nosapho kunye imihla yokugqibela yobomi.
Wonke amava ahlala kunye noPepe, ukumbona engakhathali emsebenzini wakhe ohloniphekileyo kundenza ndiqonde ifa lomntu oyintandane wesinye isizwe onomsebenzi, umzamo kunye nentlonipho ephumelele iintliziyo zesizwe apho unokufumana inkululeko kuyo yonke into yakhe.
Akunamagama angabonakalisa iimvakalelo ezidlulayo kum ngeli xesha, apho ndithi ngethuba elide kumyeni wam, oye waya kwindawo yasezulwini kunye nobukho bukaSomandla; kodwa ndiyazi ukuba ngelinye ilanga ndiza kumbona kwakhona, xa ndibuye ndihambe ndihlangabezane noMdali wam.
Ndiyabonga uYise ongunaphakade, ngokundinika amandla ngeli lixa kwaye ndinako ukuqonda ukuba iLizwi lakho lizaliseka kum ....
"INkosi isincede kakhulu."
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-III yeNkomfa yaseLatin American gvSIG, Ukwabelana ngeprojekthi efanayo
Post Next I-AutoCAD Course ye-Microstation AbasebenzisiOkulandelayo »